TOROMARIKY NY IRAISAM-PIRENENA :: Vonona hiaro ny safidim-bahoaka ny Gis-M • AoRaha
TOROMARIKY NY IRAISAM-PIRENENA Vonona hiaro ny safidim-bahoaka ny Gis-M
Tsy manaiky fana-korontanana. Firenena vahiny maro ao anatin’ny vondrona iraisam-pirenena manara-maso akaiky ny raharaha eto Mada- gasikara, mivondrona ao anatin’ny Gis-M, no niaraka namoaka fanambaràna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no-tanterahina, tamin’ny 19 desambra lasa teo.
Mazava sahady ny toromarika fa tsy maintsy manaja sy mankatò ny voka-pifidianana araka izay hikirakiran’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) sy ny didy havoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) mikasika ny voka-pifidianana ny rehetra, ireo kandidà roa niatrika an’iny fihodinana faharoa iny.
Amin’ny ankapobeny, nilaza ny fahafaham-pony tamin’ny fizotran’ny latsa-bato kosa ny Gis-M sady nanoritra fa « tao anatin’ ny fangaraharana sy ny filaminana no nanatontosana an’izany. Midera an’ireo andrimpanjakana rehetra sy ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana izahay ».
Voamarika ny fisaorana ny mpitandro filaminana tamin’ny fanatanterahana ny asany teo amin’ny fiahiana ny fandriampahalemana nandritra ny latsa-bato.
Nomarihin’ireto firenena mandrafitra ny Gis-M izay isan’ny nitarika ny fanelanelanana tamin’ny krizy malagasy ireto ihany koa fa «efa misy ireo rafitra na andrimpanjakana nomena fahefana hitsara ny raharaham-pifidianana ka tokony hanaja an’izany ireo kandidà ». « Raha ilaina ny fanampiana ny iraisam-pirenena amin’ny fiarovana ny safidim-bahoaka dia vonona amin’izany izahay », hoy hatrany ny fanambaràna.
Mba tsy ho haingo ambony tsikoko indray !
Fitrandrahana angovo Handefa iraka ho any Alemaina ny fitondrana malagasy
Fizarana vola – fifidianana Lehiben’ny fokontany iray nosamborin’ny zandary sy polisy
FANONDRANANA ANDRAMENA :: Nosamborin’ny Tafika ny sambo « Flying »
Fanivaivana manampahefana ambony Zandary telo lahy namalivaly ny Praiminisitra teny an-dalambe
Fitakiana volabe Tratra ilay lehilahy naka an-keriny ny zandriny, telo taona
Loza goavana teny amin’ny by-pass Karohina ny mpamily taksibe nahafaty olona telo